သင်လက်ရှိ FACEBOOK အသုံးပြုနေတဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံလို့မရအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် - Pyone Pyone Lay
ဒီနေ့မှာတော့ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်မယ်ထင် တဲ့အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သင်လက်ရှိ Facebook အသုံးပြုနေတဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံလို့မရအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
For Android >> Setting >> Apps >> Manage Apps >> Facebook >> App Permission >> Location >> Deny ဒါဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး Setting ထဲသွားပါ။ ပြီးရင်တော့ Apps ထဲကို ဝင်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ Manage Apps ထဲဝင်ပေးပါ။ Manage Apps ထဲရောက်ရင်တော့ Facebook ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ App Permission ထဲ ဝင်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ Location ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာ “Allow all the time” ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် “Deny” ကို ရွေးပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သင် Facebook ကို
ဘယ်နေရာကသုံးနေတယ်ဆိုတာကို ခြေရာခံလို့ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။သင့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ တခြား Application ‌တွေရဲ့ Location တွေကို ပိတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီနည်းလေးအတိုင်း ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။For iOS >> Setting >> Facebook >> Location >> NeveriOS Devicesေ
တွအတွက်သင့်လက်ရှိ တည်နေရာကို မသိစေချင် ဘူးဆိုရင်တော့ Setting ထဲသွားပါ။ ပြီးရင်တော့ Facebook ထဲမှာရှိတဲ့ Location ဆိုတဲ့နေရာမှာ Never ကိုထားပေးရ မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့် iPhone ထဲမှာရှိတဲ့ တခြားApplication ‌တွေရဲ့ Location တွေကို ပိတ်ထားချင် တယ်ဆို ရင်လည်း ဒီနည်းလေး အတိုင်း ပိတ်ထားလို့ ရပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြ ပါစေ။
သငျလကျရှိ FACEBOOK အသုံးပွုနတေဲ့ တညျနရောကို ခွရောခံလို့မရအောငျ ဘယျလိုပွုလုပျရမလဲ? ဆိုတဲ့ နညျးလမျးလမြှေဝပေေးလိုကျပါတယျ
ဒီနမှေ့ာတော့ လူတိုငျးအတှကျ လိုအပျမယျထငျ တဲ့အကွောငျးအရာလေး တဈခုကို မြှဝပေေးသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ သငျလကျရှိ Facebook အသုံးပွုနတေဲ့ တညျနရောကို ခွရောခံလို့မရအောငျ ဘယျလိုပွုလုပျရမလဲ? ဆိုတဲ့ နညျးလမျးလေးကို မြှဝပေေးသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
For Android >> Setting >> Apps >> Manage Apps >> Facebook >> App Permission >> Location >> Deny ဒါဆိုရငျတော့ ပထမဆုံး Setting ထဲသှားပါ။ ပွီးရငျတော့ Apps ထဲကို ဝငျပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ Manage Apps ထဲဝငျပေးပါ။ Manage Apps ထဲရောကျရငျတော့ Facebook ကို နှိပျပေးလိုကျပါ။
ပွီးရငျတော့ App Permission ထဲ ဝငျပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ Location ကို နှိပျပေးလိုကျပါ။ဒီနရောမှာ “Allow all the time” ဖွဈနမေယျဆိုရငျ “Deny” ကို ရှေးပေးရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ သငျ Facebook ကို
ဘယျနရောကသုံးနတေယျဆိုတာကို ခွရောခံလို့ရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။သငျ့ဖုနျးထဲမှာရှိတဲ့ တခွား Application ‌တှရေဲ့ Location တှကေို ပိတျထားခငျြတယျဆိုရငျလညျး ဒီနညျးလေးအတိုငျး ပိတျထားလို့ရပါတယျ။For iOS >> Setting >> Facebook >> Location >> NeveriOS Devicesေ
တှအတှကျသငျ့လကျရှိ တညျနရောကို မသိစခေငျြ ဘူးဆိုရငျတော့ Setting ထဲသှားပါ။ ပွီးရငျတော့ Facebook ထဲမှာရှိတဲ့ Location ဆိုတဲ့နရောမှာ Never ကိုထားပေးရ မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ iPhone ထဲမှာရှိတဲ့ တခွားApplication ‌တှရေဲ့ Location တှကေို ပိတျထားခငျြ တယျဆို ရငျလညျး ဒီနညျးလေး အတိုငျး ပိတျထားလို့ ရပါတယျ။ အားလုံးပဲ အဆငျပွကွေ ပါစေ။